Nderupi tende repamusoro redenga rakanyanya kugadzikana?
Yakasarudzika mota iri zvishoma nezvishoma kuwana mukurumbira munyika. Chido chevanhu vechiChinese chekufamba-kutyaira kwavo kufamba chiri kupisa gore negore. Vazhinji vanofarira zvekufamba vanofarira kuteedzera nzvimbo dzisingasvikike uye vanofara kunakidzwa nemufaro wekunze musasa. Nekudaro, ikozvino kufamba kwekunze kuri sub ...
Zano rakanakisa rekudzika musasa mutende?
Tende ndiwo musha wedu wekufamba kunze. Hunhu hwetende hunogadza kuchengetedzeka uye kunyaradzwa kwekurara kwedu munzvimbo dzekunze. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe uenzanise kuvakwa kwetende! Kwenguva yakareba, dzimwe shamwari dzaisanyatsonzwisisa hunyanzvi hwekuvaka matende, ...
Iyo mota yaunoda kuisa tende yedenga yakakura zvakadii?
Chero bedzi zvakachengeteka kuisa, isarudzo yako wega kuti ndeupi saizi yekuisa. Kambani yedu inewo China Roof Top Tent iri kutengeswa, tinogamuchirwa kubvunza. Nekusimuka uye kuvandudzwa kwemitambo yekunze kumba nekune dzimwe nyika, vanhu havasi vatorwa kune iro izwi rekudzika musasa. Vanhu vazhinji vanoshandisa kudzika musasa sefa ...
Ungasarudza sei Kambi yekuKurara iwe neiyo Yakanaka Scenery?
SaDenga Remusoro Tende Rinotengesa, goverana newe. Nenzvimbo yayo yakakura uye nzvimbo dzinoyevedza, Xinjiang inozivikanwa se "paradhiso yemitambo yekunze". Fungidzira uchitsvaga inotonhorera uye yakachena nzvimbo mune inopisa yezhizha kupisa. Sunga tende, vhura bhegi rekurara, uye uve pasi penyeredzi, chinyadzo ...
SWAG Chigadzirwa Ruzivo !!!
Zvakakosha! Kuti uwane gungano rakachengeteka uye rakakodzera, shandisa, uye utarisire kuverenga nekutevera mirairo yese. Wese munhu anoshandisa tende iri anofanira kutanga averenga bhuku iri. Zvimwe Zvakasarudzika ● Homwe diki yekuchengetera pakona yemusoro. Nzvimbo huru yekuchengeta makiyi kana tochi diki. ...
Nhoroondo yematende edenga
Roof Top Tentalso ine izwi rekuti "imba" padenga, ine nhoroondo yemakumi mashanu kana matanhatu emakore mumaindasitiri akapoterera akagadzirwa neindasitiri yekugadzira mota. Nekuwedzera kwevaridzi vemota muChina, kuzvityaira-pachako kutyaira kuri kudziya zvishoma nezvishoma, uye Roof Ku ...
Ndezvipi zvinhu zvehombodo yetende repadenga?
Arcadia Camp & Outdoor Zvigadzirwa Co, Ltd. ndeimwe yevanotungamira vekunze zvigadzirwa vagadziri vane makore makumi maviri 'ruzivo mumunda, nyanzvi mukugadzira, kugadzira uye kutengesa zvigadzirwa zvinovhara tende yetraira, matenga edenga pamusoro, matende emisasa, mabhegi, mabhegi ekurara , nepanhovo uye h ...
SWAG chigadzirwa ruzivo uye mashandisiro!
Iyo imwechete Swag Tende iri nyore kuwana, sezvo ichigona kuvhurwa pamusoro pehurefu hwayo hwese. Izvi zvinokupa iwe mukana wekurara pasi peredzi, uchiri kudzivirirwa kubva kune zvinotsamwisa zvipembenene nemadziro mesh. Nekudaro, tende rako richagara rakanaka uye rinotonhorera, kunyangwe panguva inopisa yezhizha zuva. Ndiyo yekupedzisira ...
Nzira yekusarudza yekunze mota musheni?
Iyo mota awning inofanirwa kuve nyore kuisa, nyore kuvhura uye kupeta, zviri nyore kufamba, sarudzo yakanakisa yealuminium alloy zvinhu, jira rejira. Iyo mota Side Awning, ndiyo nzira kwayo yekupedzisa musasa wako; kupa chivando kubva kunaya kana zuva. Ichi chidimbu chegear chakavakwa zvakanaka, uye chete ...
Arcadia kaviri musuwo canvas bhero tende
Arcadia kaviri musuwo kanivhasi bhero tende yakavakwa ne yakazara yakazara isina mvura pasi pepa uye isina mvura inodzivirira donje kumusoro, omly danda rimwe pakati. Kufefetedza kwemhepo kunobva pamusuwo wekuvhara pamberi pechiso uye 4 inovharwa padivi windows windows. Inotora vanhu vaviri kutenderedza 10 m ...
Yakasarudzika Inogara Yakadzika Camping Kunze Canvas Kaviri Austrailian Swag Tende
Kunze kwekudzika matende edenga tende zano
Arcadia padenga repamusoro tende ndeimwe yetende dzakaomesesa nyowani ine skylight pamusika, vanhu vanogona kuona 360 degree nzvimbo. Iyo yakakwana kune 4x4 trailers uye yakaoma yakaoma-yemumigwagwa rigs. Iyo inorema huremu yakapetwa-yakamisikidzwa-yekumira machira emuviri mukuru ndipo patakatanga. Tinowedzera ...